Fahasalamana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy
"Hatramin’ny faladia ka hatramin’ny loha dia tsy misy izay tsy marary, fa ratra sy dian-kapoka ary fery vao."Isaia 1:6
"Jesosy … nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon’ny herin’ny devoly."Asan’ny Apostoly 37:38
Nisy dokotera kristiana nanombana ny toe-pahasalamana ankapoben’izao fiarahamonina izao, amin’ity fiandohan’ny arivo taona fahatelo ity, nilaza hoe: «Na dia vola be aza no atokana isan-taona ikarakarana ny fahasalaman’ireo mpiara-belona amintsika, dia azo lazaina fa marary ny olona, amin’izao fotoana izao. Marary noho ity fiarahamonina ity, marary noho ny vaovao heno, marary noho ny maha irery, marary noho ny sakafo tsy voalanjalanja, marary noho ny fijaliana sy ny fieritreretana ny aretina. Samy maka ho azy ny tsirairay, ka manadino fa anatina fianakaviam-be iray izy, dia ny zanak’olombelona. Ary indrindra, hadinon’ny tsirairay fa zavaboarin’Andriamanitra izy. Ao anatin’izao fiainana mirotoroto izao, tsy ananana fotoana ieritreretana sy andinihana, dia tafiditra amina fisavorovoroana tsy misy farany ny olona».
Izany tombana izany dia mitaona ny tsirairay ho matotra, hanontany tena hoe: Iza moa aho? Inona no ilàna ahy? Inona no tanjon’ny fiainako?
Andriamanitra tsy nahary antsika hiaina ao anatin’ny hadalan’izao tontolo mivaona izao, fa ao anatin’ny fiadanana sy fahafenoana vokatry ny fifandraisana marina amin’ny Ray.
Ahoana no mampisy izany fifandraisana izany? Amin’ny fiekena ny fahotana amin’Andriamanitra sy ny finoana an’i Jesosy Kristy. Ary ahoana no ihazonana izany? Amin’ny fikatsahana mandrakariva ny sitrapony, izay asehon’ny Teniny; amin’ny fanarahana am-pahatokiana izany sitrapony izany ; ary koa amin’ny vavaka, dia ny fifampiresahan’ny zanaka amin’Ilay Rainy Izay any an-danitra.
Mijanòna kely, henoy Ilay vonona hanome fiadanam-po anao, sy hitarika anao amina lalam-baovao.